एउटा विद्यार्थीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
एउटा विद्यार्थीको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
फाल्गुन १२, २०७४ मिलन पाण्डे
काठमाडौँ — बेलायतको एउटा स्कुलले एक छात्राको अभिभावकलाई पत्र लेख्छ, ‘तपाईंकी छोरी पढ्न सक्दिनन् । उनमा एकाग्रता छैन । चली मात्र रहन्छिन्, एक ठाउँमा बस्नै सक्दिनन् ।’ परिवारलाई पिर पर्छ अनि उनकी आमाले छोरीलाई डाक्टरकोमा लान्छिन् ।
धेरैचोटि जाँचेपछि डाक्टरले एक्लै कुरा गर्ने भनेर आमालाई बाहिर निकाल्छन् र नजिकै रेडियो बजाएर छोरीलाई त्यहीँ छोडिदिन्छन् । बाहिर पुगेको केही बेरपछि डाक्टरले आमालाई पर्दाबाट बिस्तारै चियाउन भन्छन् । आमाले बिस्तारै पर्दा उघारेर हेर्दा छोरी रेडियोको धुनमा नाचिरहेको देख्छिन् । डाक्टरले मुस्कुराउँदै आमालाई भन्छन्, ‘तपाईंकी छोरी बिरामी होइन, उसमा अर्कै प्रतिभा छ । उसलाई नृत्यको विद्यालयमा लैजानुस् ।’ आमाले छोरीलाई नृत्य स्कुलमा लान्छिन् । एउटा साधारण स्कुलले असफल घोषित गरेको ती छात्रा विशिष्टीकृत विद्यालयमा भर्ना भएपछि सफलता चुम्न सक्छिन् । अहिले ती छात्राले नृत्यको ठूलो कम्पनी चलाएकी छन् । जिलियन लायन एउटा ठूलो नामा मात्रै बनेको छैन, दाम पनि उत्तिकै कमाउँछिन् उनी । यो घटना पहिलो पटक थाहा पाएपछि मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो, ‘यदि जिलियन हाम्रो समाजमा अनि यही शिक्षा प्रणालीमा जन्मिएकी भए के बन्थिन् होला ?’
्म २५ वर्षदेखि यही शैक्षिक प्रणालीमा पढ्दै छु अनि करिब १० वर्षदेखि पढाउँदै छु । मेरो भोगाइ र बुझाइ भन्छ, यो शिक्षा प्रणालीले हाम्रो विद्यार्थीलाई मद्दत गरिरहेको छैन । यसले विद्यार्थीलाई शिक्षित बनाइरहेको छैन । शिक्षा भनेको आफूले सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु हो । हामीले बिरुवामा पानी हाल्नुपर्छ भनेर पढेका छौं तर हाम्रा बगैंचाका बिरुवा पानी नहालिएकाले मर्छन् भने के हामीलाई शिक्षित भन्न मिल्छ ? मैले धेरै विद्यार्थी देखेको छु जसले कम्प्युटर विषयमा १०० मा ९८ ल्याएका छन् । तर उनीहरूलाई कम्प्युटर राम्ररी खोल्न अनिबन्द गर्न पनि आउँदैन । हामीले पढेको कुरा खाली सैद्धान्तिक मात्र भयो, व्यावहारिक भएन । जीवन उपयोगी हुन सकेन ।
हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा प्रमुख ३ आधारभूतसमस्या छन् :
धेरै वर्षपछि हालै म आफ्नो गाउँ गएको थिएँ । गाउँ जाँदै गर्दा मेरो १२ कक्षा पास गरेकी बहिनीले धानलाई देखाउँदै, ‘यो के हो ?’ मैले भनें, ‘यो धान हो र यसलाई मिलमा लगेर कुटेपछि चामल बन्छ ।’ उनले अचम्म पर्दै सोधिन्, ‘चामल नै फल्ने होइन र ?’ काठमाडौँको निजी विद्यालयमा पढेकालाई धान र चामलबारे थाहा छैन । प्रत्येक पटक हामी नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर पढाउँछौं तर त्यति कुरा पनि बुझाउन सकेका रहेनछौं । हाम्रो शिक्षा खालि पास भएर जागिर खाने सर्टिफिकेट मात्र बनेको छ । दु:ख त कति बेला लाग्छ भने, हाम्रो देशमा वातावरणमा विद्यावारिधि गरेका कैयौं विज्ञ छन् तर यस विषयमा एक शब्द पनि बोल्दैनन् । सडक बिग्रँदा इन्जिनियरहरू चुप छन् अनि वकिलहरूलाई हाम्रो शिक्षा प्रणालीले न्यायालयको रक्षामा उभिन सिकाएको छैन ।
कलालाई महत्त्व नदिनु
मैले विज्ञान पढ्नु पछाडिको मुख्य कारण मेरो एसएलसीमा डिस्टिङ्सन आउनु थियो । पढाइमा राम्रो भएका मानिसहरूले ‘कमर्स’ वा ‘आर्ट्स’ पढ्नुहुन्न भन्ने बुझाइ छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई सधैं डाक्टर, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर सिकाउँछन् । तर पढेर सफल कलाकार वा खेलाडी बन्न सकिन्छ भनेर सिकाएन । हामी घोकन्ते शिक्षामा दीक्षित छौं । रचनात्मकता अनि कलात्मकतालाई हाम्रो शिक्षाले स्थान दिएको छैन ।
हाम्रो शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो ।
त्यसैले हाम्रा सफल राजनीतिज्ञ, पत्रकार, कलाकारले पनि पहिले विज्ञान पढेर पछि विषय परिवर्तन गरेको पाइन्छ । यदि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले सिर्जनालाई स्थान दिन्थ्यो भने आज अब्बल विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकता कलाहुन सक्थ्यो ।
गल्ती गर्न नपाउने प्रणाली
सन् १९३९ मा वेन्डल जोन्सनले आयोवा विश्वविद्यालयमा २२ जना अनाथ विद्यार्थी मार्फत एउटा प्रयोग गरेका थिए । ११–११ जना को दुइटा समूहमध्ये आधालाई सकारात्मक तरिकाले माया गरेर सिकाइयो अनि आधालाई नकारात्मक तरिकाले गाली गरेर सिकाइयो । प्रयोगको अन्त्यमा सकारात्मक तरिकाले सिकाइएका विद्यार्थीहरूले राम्रो गरे अनि नकारात्मक तरिकाले व्यवहार गरिएका विद्यार्थीले खासै सुधार गर्न सकेनन्, बरु केहीले त बोल्नै छाडे ।
हामी पनि नकारात्मक तरिकाले सिकाउँदै छौं । हामी कुनै विद्यार्थीले जानेन भने सिकाउनुको साटो गाली गर्छौं । हामी प्रेरित गर्नुको सट्टा ‘तैंले सक्दैनस्’ भन्छौं । हाम्रो यही व्यवहारले नै हाम्रा विद्यार्थी असफल बन्दै छन् किनकि हामीले अनुशासनको नाममा सजाय दिने प्रणाली रोजेका छौं । हाम्रो अनुशासन प्रणालीले राम्रो गराउनेभन्दा पनि नराम्रो गरेपछि सजाय दिने काम गर्दै छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीहरू गल्ती गर्न डराउँछन् । गल्ती गर्न डराउनु भनेको सिक्नु वा प्रयोग नगर्नु हो जसले गर्दा विद्यार्थीले रचनात्मक शक्ति गुमाउँदै जान्छन् ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली टालटुल मात्र गरेर सुध्रनेवाला छैन । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको जगैबाट पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ । जसका लागि देशमा हुँदै गरेको राज्य व्यवस्थासँगै एउटा विज्ञ टोली बनाएर शिक्षा प्रणालीका सम्पूर्ण पाटा केलाउन जरुरी छ । जसमा मुख्य यी तीन पाटाहरूमा व्यापक छलफल अनि संरचनात्मक सुधार नै आवश्यक छ ।
शिक्षकहरूको आफ्नै पेसागत समस्या छ । तलब सुविधा पर्याप्त नभएकाले राम्रा विद्यार्थीले शिक्षणलाई रोजाइको विषय बनाउन सकेका छैनन् । निजी विद्यालयको हकमा त शिक्षकहरूमाथि श्रम शोषण नै भएको छ । तसर्थ शिक्षकले पाउन पर्ने सुविधा दिलाउने नीति लिनुपर्छ ताकि शिक्षकले आफ्नो आधारभूत आवश्यकताबारे सोच्न नपरोस् । साथै, शिक्षकहरूको स्तर उन्नतिबारे सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई समयसमयमा ‘अपडेट’ अनि ‘अपग्रेड’ गरिन जरुरी छ ।
शैक्षिक क्षेत्रको परिवर्तनको सुरुआत शिक्षकहरूबाटै हुन जरुरी छ । शिक्षकले एक्लै शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न नसक्लान् तर आफैंलाई त परिवर्तन गर्न सक्छन् नि ? एउटा सफल शिक्षक त्यो हो जसले आफ्ना विद्यार्थीलाई आफ्नो लक्ष्यतर्फ उन्मुख गर्न सक्छन् ।
हालको परिस्थितिमा विद्यालयहरूले वर्ग विभाजनमा मलजल गर्ने काम गर्दै छ । निजी विद्यालयमा पढ्नेहरू विद्यालयको गाडी चढी पढ्न जान्छन् । अनि आफ्नै वर्गका साथीसँग कुरा गर्छन् र आफ्नै संसार बनाउँछन् । त्यस्तै यता सरकारी विद्यालयमा पनि एउटै वर्गका विद्यार्थीहरू पढ्छन् र आफ्नै समूहमा रमाउँछन् । यसरी हाम्रो समाजमा बिस्तारै ठूलो खाडल पैदा हुँदै छ । हाम्रो संस्कृति, चाडपर्व, रहनसहनलाई एकआपसमा सञ्चार हुन रोकिँदै छ । जसले गर्दा, हाम्रो समाजमा अर्को प्रकारको वर्ग विभाजन हुँदै छ ।
हाम्रोजस्तो समाजमा शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु हुँदैन । झन् राजनीतिकरण त हुनु हुँदै हँुदैन । तसर्थ, शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । सरकारी विद्यालयको स्तर उन्नति गर्नैपर्छ । पूर्वाधार अनि शिक्षकको स्तर उन्नतिमा व्यापक लगानी आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयको बारेमा आम नागरिकको धारणा परिवर्तन गर्न केही ठोस योजनाहरू ल्याउनैपर्छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्दै अब निजी विद्यालयको संख्या बिस्तारै घटाउँदै केही समयपछि, अहिलेका निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ । यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । तर यस कदमको विकल्प छैन ।
पाठ्यक्रम अनि परीक्षा
विद्यालय शिक्षामा उत्कृष्ट देश फिनल्यान्डमा केही वर्षयता विषयगत पढाइ हटाउँदै चाहिएको शीर्षकमा मात्र पढाउन थालिएको छ । अर्थात्, अब तपाईंले भूगोल, इतिहास, रसायनशास्त्रका सबै पाठ पढ्नु पर्दैन । आफूले छानेको विषयको चाहिएको पाठ पढ्न सक्नुहुन्छ । यो शिक्षा जगत्मा ठूलो क्रान्ति हो । अब नेपालमा पनि यस्तो शिक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्छ ताकि, ‘मैले यो सबै किन पढिरहेको छु ?’ भन्ने उत्तर विद्यार्थीले खोज्न नपरोस् ।
विद्यार्थीलाई केही मौलिक विषयमा आफ्नै भाषामा पढ्न प्रेरित गरिनुपर्छ । सामाजिक शिक्षाजस्तो विषयमा त विद्यार्थीले आफ्नो मनको भाव आफ्नै भाषामा व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ । अझ यस्ता विषयमा त झन् नेपालीभन्दा पनि मातृभाषामा विद्यार्थीलाई आफूलाई व्यक्त गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । साथै, पाठयक्रममा व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, ताकि विद्यार्थीले घोक्नेभन्दा पनि बुझ्न सकून् अनि व्यवहारमा उतार्न सकून् ।
प्रत्येक प्रश्नपत्रको माथि ‘विद्यार्थीलाई सकेसम्म आफ्नै शैलीमा उत्तर लेख्न प्रेरित गरिन्छ’ भनिएको हुन्छ तर हाम्रो प्रणालीले विद्यार्थीबाट घोकेको उत्तरै माग्छ । हाम्रो परीक्षा प्रणालीले समेत विद्यार्थीमा कति ज्ञान छ भनेर जाँच्नेभन्दा पनि कसले कति घोकेको छ भन्ने जाँच्ने गरेको छ । तसर्थ, हाम्रो परीक्षा प्रणालीमा नै व्यापक सुधार आवश्यक छ । अब विषयगत परीक्षासँगै प्रयोगात्मक परीक्षा पनि लिइनुपर्छ । परीक्षामा लेख्ने मात्र विधि नभई अन्य विधि पनि अपनाउन जरुरी छ । वर्षभरि पढाएर परीक्षा लिनेभन्दा पनि एउटा शीर्षक सकिएपछि परीक्षा लिनुपर्छ । अनि कक्षा ५ सम्म कुनै पनि प्रकारको परीक्षा लिइनु हुन्न ।
हेर्नुस् त, हाम्रा केही नाम चलेका ठूला विद्यालयले कक्षा १ मा भर्ना गर्न परीक्षा लिने गरेको । त्यो निकै गलत काम हो । १ कक्षामा पढ्नेलाई जिन्दगीको पहिलो खुड्किलामै असफल बनाउने शिक्षा प्रणालीले उसलाई भविष्यमा सफल बनाउन सक्दैन ।
पिटर डायमान्डिसका अनुसार सन् १९०० देखि २००० सम्म जति परिवर्तन भयो अब त्यति परिवर्तन सन् २०१६ देखि २०२२ सम्ममा हुनेछ । अब संसार हाम्रो गतिभन्दा धेरै छिटो कुद्दै छ । तसर्थ, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा सन्ततिलाई सफल बनाउन सक्दैन भन्ने बुझ्न अब ढिलो गर्नु हुन्न । अहिले हामीले खोजेको समृद्धिको यात्रा शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन ल्याएर मात्र सम्भव छ । शिक्षामा परिवर्तनबिना समृद्धि सम्भव छँदै छैन ।
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०९:०६
क्रिकेटमा अन्तिम बल र विकेट रहेसम्म हारजित छिनोफानो हँुदैन । त्यसैमा नेपालको आशा थियो ।
फाल्गुन १२, २०७४ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन २ मा राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा क्यानडाविरुद्ध नेपाल हारको संघारमा पुगेको थियो । १९४ रनको चुनौती पाएको नेपालले १४४ रन जोड्दै नौ विकेट गुमाइसकेको थियो । सोचिएको थियो— अब नेपाली टिम हार्छ । नामिबियामा भएको डिभिजन २ को उक्त खेल हार्‍यो भने विश्वकप २०१९ छनोटमा पुग्ने नेपालको सम्भावना पनि समाप्त हुने थियो । तर फाइनसरहको खेल नेपालले गुमाउने निश्चितजस्तै देखिएको थियो ।
अन्तिम ब्याटसम्यान थिए, सन्दीप लामिछाने । उनी बलर हुन् । लेग स्पिनर । र कामचलाउ ब्याटसम्यान । विन्डहोकको क्रिजमा ओर्लंदा उनलाई के लागेको थियो त ? उनले भने, ‘इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा जति हुन्छ खेल्दै जाउँ । यस्तो मौका फेरि आउँदैन । जतिसम्म सकिन्छ बिस्तारै गेमलाई लिएर जाउँ भन्ने लागेको थियो । त्यतिबेला पनि जित्ने सोचेको थिइनँ ।’
क्रिकेटमा अन्तिम बल र विकेट रहेसम्म हारजित छिनोफानो हँुदैन । त्यसैमा नेपालको आशा थियो । अन्तिम विकेटका लागि करण केसीसँग ५१ रनको साझेदारी गरेका सन्दीपले भने, ‘अन्तर ३० रनमा झरेपछि खेल तान्न सक्ने अलि विश्वास हुनथाल्यो । अन्तर १० रनमा आएपछि त्यो खेल उनीहरू (क्यानडा) आफैंले समर्पण गरेजस्तै भयो ।’ सेसिल परवेजले अन्तिम ओभरमा सुरुका चार बलमा कुनै रन दिएनन् । ‘चार बल राम्रो फाले,’ सन्दीपले सुनाए । नेपाललाई खेल जित्न अन्तिम दुई बलमा ८ रन चाहियो । ओभरको पाँचौं बलमा करणले छक्का प्रहार गरे । त्यसपछि परवेजले वाइड फाले । र अन्तिम बलमा करणले १ रन जोड्दै नेपाललाई सनसनीपूर्ण जित दिलाएका थिए ।
‘नेपालको जितको श्रेय करण दाइलाई जान्छ,’ सन्दीपले भने, ‘त्यस्तो इनिङ्स मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ । विश्वकप छनोटमा पुग्नलाई जित्नैपर्ने खेलमा यस्तो इनिङ्स वास्तवमै अविश्वसनीय थियो ।’ उनले त्यसबेला आफू विकेट जोगाएर स्ट्राइक करणलाई दिने सोचेको बताए । सुनाए, ‘म खेलिरहन्छु । जति बल डट खेले पनि केही हुँदैन, हजुरले अर्को ओभरमा पाइहाल्नुहुन्छ । १ रन आउँछ भने लिन्छु, त्यसका लागि खेल्दिन्छु भनेर एउटा खेलाडीले देखाउनुपर्ने विश्वास देखाइरहेको थिएँ । दाइले पनि हुन्छ तिमी मज्जाले खेल भन्नुभयो । अनि आत्मविश्वास आयो ।’
कठिन परिस्थितिमा नै उत्कृष्ट खेलाडीले कला देखाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा राम्रो बलरले कमजोर बल दुर्लभै फाल्छन् । आफू क्रिजमा छँदा १–२ बल मात्र केही कमजोर रहेको सन्दीपको ठम्याइ छ । उनी मिहिनेती छन्, इमानदारीसाथ योजना बनाएर अघि बढ्छन् । विश्वकप छनोटमा पुगेपछि के सोचियो ? ‘डिभिजन २ मा जानुअघि एउटा यात्रा सुरु भएको थियो अब अर्को यात्रा आउँदै छ । त्यसको लागि तयार हुने । भलाद्मी भएर अगाडि बढिरहने । गेमलाई अझै राम्रोसँग अध्ययन गर्ने,’ उनले जवाफ दिए ।
तेस्रो खेलमा केन्या ठूलो स्कोरतर्फ बढेको थियो । पाँचपल्ट विश्वकप खेलेको केन्याले बिनाक्षति ६५ रन बनाइसकेको थियो । त्यसैबेला बलिङको जिम्मेवारी पाएका सन्दीपले भने, ‘लेग स्पिनरको रूपमा मेरो काम रन खाए पनि विकेट लिनुपर्ने हुन्छ । विकेट राम्रो थियो, हल्का बाउन्स पनि । केन्याको साझेदारी राम्रो भइरहेको थियो । एक जनालाई पनि आउट गर्‍यो भने हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ । अनि अर्को ब्याटसम्यानले सेट ब्याटसम्यानसँग खेल्छ । नयाँ ब्याटसम्यानलाई पनि निकाल्न मिल्छ भन्ने सोचेको थिएँ । त्यस्तै भयो पनि ।’ उनले केन्याविरुद्ध २० रन खर्चेर कीर्तिमान ५ विकेट लिएका थिए ।
कप्तान पारस खड्काले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै शतक बनाए पनि नेपालले फाइनलको नतिजा यूएईविरुद्ध ७ रनले गुमाएको थियो । ‘चारदेखि ७, ८ विकेटको बीचमा एउटा राम्रो साझेदारी भएको भए हामीले १–२ ओभरअघि नै फाइनल जित्थ्यौं होला । तर विकेट गइरह्यो,’ सन्दीपले भने, ‘पारस दाइको एकदम राम्रो इनिङ्स थियो । प्रतियोगितामा सबैले कुनै न कुनै रूपमा योगदान दिए । यी सबै हेर्दा एउटा जुनियर खेलाडी भएर पनि एकदम रमाइलो लाग्छ ।’
निकै किफायती बलिङ गरेका सन्दीपले क्यानडाविरुद्ध लगातार दुई छक्का पनि बेहोरे । ‘क्यानडाको विकेट गइरहेको थियो । ब्याटसम्यानले आक्रामक खेल्छ अनि विकेट आउँछ भनी मैले रिस्क लिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीं राम्रो बलरले पनि रन खान्छ । त्यसबेला विकेट लिएको भए क्यानडा २०–३० रन कममै रोकिन सक्थ्यो । दुर्भाग्यवश छक्का खाएँ ।’
अर्को सातादेखि हुने विश्वकप छनोटमा नेपालले समूह चरणमा आयोजक जिम्बावे, अफगानिस्तान, हङकङ र स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ । दस टिम सहभागी छनोटमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) को एसोसिएट सदस्यमध्ये नेदरल्यान्ड्सबाहेकको उत्कृष्ट तीनमा रहन सके नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय (वान डे) मान्यता पाउनेछ । ‘वान डे मान्यतासँगै विश्वकपमा पुग्ने हाम्रो सपना छ । तीन करोड नेपालीको पनि,’ चितवनका सन्दीपले भने ।
दुईपल्ट म्यान अफ द म्याच भएका उनले म्यान अफ सिरिजको अवार्ड नै जिते । उनलाई म्यान अफ द सिरिज दिइएकोमा यूएईका कप्तानले ‘आईपीएल फयाक्टर’ ले काम गरेको भन्दै आलोचना गरे । ‘त्यस्तो केही लाग्दैन किनभने प्रतियोगितामा मैले राम्रो गरेको थिएँ । म सामान्य खेलाडी भए पनि अवार्ड पाउँथें होला,’ प्रतियोगितामा १७ विकेट लिएका सन्दीपले जवाफ दिए ।
नेपाली टिम डिभिजन २ को तयारीमा दुबई पुगेको थियो । त्यसैबेला आईपीएल २०१८ को अक्सन भयो । सन्दीपमाथि दिल्ली डेरडेभिल्सको बोली लाग्यो । उनी आईपीएलमा आबद्ध हुने पहिलो नेपाली खेलाडी बने । यसपालि आईपीएलमा आबद्ध उनी एसोसिएटका एक्लो खेलाडी हुन् । त्यसले पनि डिभिजन २ मा काम गरेको बताइन्छ ।
‘सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्‍यो,’ प्रतियोगिताअघि पक्का भएको आईपीएल यात्राबारे सन्दीपले भने, ‘राम्रो फ्रेन्चाइज लिगमा समावेश हुँदा फरक त पर्छ नै । पहिलाजस्तो खेलेको थिएँ त्यस्तै खेल्छु भन्ने सोचेको थिएँ तर डिभिजन २ मा सोचेभन्दा राम्रो भयो ।’ उनले थपे, ‘सबै विपक्षी खेलाडीले भेट्दा बधाई दिन्थे । आईपीएलमा आबद्ध भएकाले मप्रति उनीहरूमा ‘फियर फयाक्टर’ सिर्जना भएको हुन सक्छ । मेरो बलमा उनीहरूले कसरी खेल्ने भन्ने पत्तो पाएनन् होला । त्यसको फाइदा मलाई भयो ।’
आईपीएल यात्राले के परिवर्तन ल्याउँछ ? उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो केही परिवर्तन आउँछ भन्ने छैन । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भइसकेपछि फ्रेन्चाइज लिग खेल्दा त्यस्तो केही बदलाव नआउनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ ।’ छोटो करिअरमै मारेको फड्कोबारे उनले भने, ‘तहगत रूपमा भएको सोच्छु । दुई वर्ष यति छिटो बितेछ कि आफूलाई थाहै भएन । यसलाई निरन्तरता दिएर सकारात्मक बाटोमा अघि बढ्छु भन्ने लाग्छ ।’
आईपीएलमा आबद्ध पहिलो नेपाली खेलाडी भएकाले सबैमा आकर्षण भएको उनको बुझाइ छ । ‘आईपीएलप्रति सबैमा एक्साइटमेन्ट छ । आईपीएल ठूलो लिग हो र यसमा खेल्न पाउँदा सबैले आफूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ,’ सन्दीपले भने, ‘त्योभन्दा मुख्य प्रतियोगिता विश्वकप छनोट हो । यसैमा केन्द्रित भइरहेका छौं ।’
सन्दीपलाई आईपीएल अक्सनअघि ट्रायलमा दिल्लीले बोलाएको थियो । ‘ट्रायलमा राम्रो गरेको थिएँ । त्यसै बेला मलाई बोली लाउनेबारे हल्का संकेत दिइसकेको थियो । तर सार्वजनिक गरिनँ । ठूला लिगमा कतिपय उत्कृष्ट खेलाडी पनि बिक्री हुँदैनन् । त्यसैले धैर्य कायम राखें । सानो कुराले ठूलो चीज सिर्जना गर्छ । त्यसरी नै हिँडिरहें,’ १७ वर्षीय उनले भने । आईपीएलमा खेल्न पाउने सम्भावनाबारे उनले भने, ‘कहिलेकाहीं राम्रो खेलाडीले पनि पोजिसन नहुँदा बाहिर बस्नुपर्छ । त्यसैले म टिमलाई जे राम्रो हुन्छ, त्यसमा खुसी हुनेछु ।’
क्याम्पाचौरमा अभ्यास गर्दा उनले कुनै दिन आईपीएल खेल्छु भन्दा साथीहरूले मजाक गरिदिन्थे । उनले सम्झिए, ‘मौका । सबै कुराको एउटा समय हुन्छ । समयमै सबै कुरा पाउँछ । समयभन्दा अगाडि कसैले केही पाउँदैन । मिहिनेत पनि हो र सबभन्दा बढी आफूलाई इमानदार राख्नुपर्छ । जहिले पनि म आफूमा त्यो लागू गर्थे । साथीहरूलाई मैले आईपीएल खेल्छु भन्थे । कहाँ जान्छौं भनेर मजाक नै हुन्थ्यो तर तयो नकारात्मक होइन । सपना ठूलै देख्नुपर्छ । सपना देख्न पैसा लाग्दैन ।’ हुन त उनले अस्ट्रेलियाली पूर्वकप्तान माइकल क्लाकसँगै खेल्ने सपना नदेखेको पनि हुन सक्छ न त रिक्की पोन्टिङलाई नै मेन्टरको रूपमा पाउने ।
एउटै ओभरमा हरेक बल फरक किसमले फाल्न सक्ने बलर हुन, सन्दीप । उनले सन् २०१६ को यू १९ विश्वकपमा आयरल्यानडविरुद्ध हयाट्रिक विकेट लिएका थिए । त्यसलाई उनले सम्झिए, ‘सुरुमा फ्ल्याट बल दिएर ब्याटसम्यानलाई हान्न लगाएर चुनौती मोलेको थिएँ । उनी स्विप हान्दा मिडविकेटमा क्याचआउट भए । दोस्रोचाहिं कट राम्रो हान्ने ब्याटसम्यान थिएँ । राम्रो बल फालेको थिएँ, आफैं जबरजस्ती चलाउन खोज्दा उनले राजु दाइ (रिजाल) लाई क्याच दिए । तेस्रो नयाँ ब्याटसम्यान थिए । गुग्ली फाल्यो भने आउट हुन्छ भन्ने सोचें । त्यसै गरें र इतिहास बन्यो पनि ।’
क्रिजमा उत्कृष्ट ब्याटसम्यान छन् भने बलिङ गर्ने बेला के सोचिन्छ ? ‘अवसर,’ उनी बोलीहाले, ‘यो राम्रो मौका हो भनी सोच्छु । विकेट आयो भने मेरा लागि राम्रो अझ टिमको लागि धेरै राम्रो । टिमलाई अत्यावश्यक भएकाले त्यो विकेट पायो भने धेरै नै राम्रो हुन्छ भन्ने सोच्छु । किनभने त्यो ब्याटसम्यानले आधा टिमको मनोबल गिराएको हुन्छ ।’
विश्वकप छनोटमा टेस्ट खेल्ने जिम्बाबेसँग अफगानिस्तानका ब्याटसम्यानका लागि के योजना छ ? ‘सामान्य । लाइन एन्ड लेन्थमा बलिङ गर्ने । अहिलेसम्म गरेजस्तै,’ उनले भने, ‘आफूभन्दा राम्रो खेलाडीसँग खेल्दा पनि धेरै कुरा सिक्न मिल्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा टिमको टेक्निकल एनालिस्ट रमन सिवाकोटीको विश्लेषणलाई ध्यान दिएर मानसिक रुपमा तयार भई मैदानमा ओर्लने गरेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय टिमका पूर्वप्रशिक्षक पुबुदु दसानायकेसँगको पहिलो भेट उनमा ताजै छ, जसले उनको भाग्य बदलेको थियो । ‘राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक ४ बजे आउँदै थिएँ, म एकदमै एक्साइटेड थिएँ र ११ बजेदेखि नै मैदानमा उहाँलाई कुरेर बसेको थिएँ । नजिक नभए पनि उहाँलाई टाढाबाटै हेर्न पाइन्छ केही कुरा सिक्न पाइन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने ।
त्यहाँ उनको बलिङबाट आकर्षित पुबुदुले सन्दीपलाई काठमाडौं क्याम्पमा बोलाए । पहिलो काठमाडौं यात्राबारे उनले भने, ‘यहाँ (क्याम्प) राम्रो गर्‍यो भने अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ । एउट मौका हो जति पनि पाइला टेक्दै गइन्छ त्यो एउटा अवसरको रूपमा आउँछ । जसरी यू १९, त्यसपछि सिनियर टिममा अवसर पाए । अहिले फ्रेन्चाइज लिगमा । यी सबै पाइला टेक्दै जाँदा मौकाहरू बढ्दै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस्तै रूपमा लिएको छु ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०९:०२